सडकमा सीम बेच्ने युवा एकाएक ४० अर्बका मालिक, नेपालबाट यसरी कमाउछन्, पैसा थाहा पाउदा सबै चकित ! – Sanchar Patrika
July 23, 2020 166
काठमाडौं । भनिन्छ कि कुनै पनि मानिस केही फरक गर्ने प्रयास गर्छ भने सफल हुन्छ । केही नयाँ गर्न सकेको खण्डमा मात्र उसलाई अघि बढ्न निकै सहज हुने गर्छ । भारतका २५ वर्षीय रितेश कुमार पनि केही नयाँ सोचको कारण सफल व्यवसायी बनेका व्यक्ति हुन् । कुनै समय उनी सडकमा बसेर मोबाइल सीमकार्ड बेच्ने काम गर्थे । तर अहिले उनीसँग ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । भारतको ओडिशा राज्यका यी युवाले जीवनमा कहिल्यै पनि अर्बपति हुन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् । रोचक कुरा त उनीसँग पढाइ पूरा गरेको कुनै प्रमाणपत्र छैन । उनले सामान्य विद्यालयको पढाइ पूरा गरेका थिए ।
१९९३ मा जन्मिएका यी युवाले १९ वर्षको उमेरमा एक कम्पनी खोलेका थिए । जसको नाम ओयो रुम्स थियो । यो कम्पनी अहिले भारतको मात्र नभई केही अन्य मुलुकमा पनि आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अहिले पनि यो कम्पनी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
रितेशले टीभीको रिमोटलाई आफ्नो नियन्त्रण राख्ने इच्छाको कारण यो कम्पनीको शुरुवात गरेका थिए । त्यतिबेला यो सम्भव थिएन । उनी सानोमा आफन्तकोमा बस्थे । उनी कार्टुन हेर्न चाहन्थे तर आफन्तको परिवारले उनलाई उक्त च्यानल हेर्न दिँदैनथे ।
उनले सन् २०१३ मा आफ्नो कम्पनीको शुरुवात गर्दा उनीसँग १०–१२ जना मानिस र आईआईटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका करिब २ सय मानिस थिए । अहिले उनको कम्पनीमा हजारौं कर्मचारीहरु काम गर्छन् । साथै नेपालमा पनि ओयो रुम्सको शाखाहरु छन् । जसबाट उनले राम्रै पैसा कमाइरहेका छन् ।
यस्तै,पालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिन नदिन चीनले नेपालमा हुने नियमित उडानलाई घटाएको दा’बी गरेकी छन् । उनले समूहमा हुने भ्रमण तथा चिनियाँ कामदारहरुको फिर्तालाई रोक लगाएको बताएकी छन्। बिहीवार दूतावासमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालसँग दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा राजदूतले चीनमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सरकारसँग काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएकी छन्।
‘एउटा राम्रो आपतकालीन संयन्त्रले आवश्यक सामाग्री आपूर्ति र माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो संयुक्त राष्ट्रिय योजना सबै क्षेत्रको संलग्नतामा जवादेही तरिकाले हुनुपर्छ । सरकार, सामाजिक संघ संस्था र सर्वसाधारण जनताले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ । खुला तथा पारदर्शी सूचनाले मानिसहरुको भावनालाई स्थिर राख्दै सरकारप्रतिको विश्वनीयता बढाउँछ। यसले नकरात्मक हल्लाहरुसँग लड्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।’
Prevतीनमहिने सुइका ३ साइड एफेक्ट : सकेसम्म प्रयोग नगरेको राम्रो ! जानकारीको लागी सेयर गरौं
जसपा सरकारमा जाने चर्चा: राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरे बेवास्ता ?
यस्ता बुवा जसले फोन र र’क्सी किन्नका लागि २५ हजारमा छोरलाई बेचेपछि…
सरकारले तोक्यो खसीबोकाको नयाँ मुल्य